Zanzibar Inovhura Mamwe Masuo kune Tourism Investments
Corporate | Advertising
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Tanzania » Zanzibar Inovhura Mamwe Masuo kune Tourism Investments
4 min kuverenga
Vachitarisa nzvimbo nhanhatu dzekusimudzira hupfumi hwebhuruu, hurumende yeZanzibar yave kukwezva vagari veChitsuwa vanogara muDiaspora kuti vaise mari kuChitsuwa ichi nekutanga mukushanya, kubata hove, uye gasi neoiri kuongorora.
Mutungamiri weZanzibar Dr. Hussein Mwinyi vave kukwezva vemabhizimisi akawanda muChitsuwa ichi, kuti vazadzikise hurongwa hwehurumende yavo hweBlue Economy kuburikidza nevanodyara mari dzepamusoro.
Dr. Mwinyi vakati hurumende yeZanzibar inoda kuenderera mberi nekusimudzira mabhizimisi nekubatanidza kukweretesa zvitsuwa zvidiki kune maInvestors epamusoro.
Zanzibar yakanga yatora mutemo weBlue Economy wakanangana nekuvandudzwa kwezviwanikwa zvemugungwa. Kushanya kwemahombekombe uye nhaka chikamu cheiyo inofungwa yeBlue Economy policy.
“Tiri kutarisa nezvekuchengetedza nzvimbo yeStone Town nedzimwe nzvimbo dzenhaka kuti tikwezve vashanyi vakawanda. Danho iri richange richifambirana nekusimudzira kushanyirwa kwemitambo kunosanganisira kutamba gorofu, musangano, nekushanya kwezviratidzwa,” Dr. Mwinyi vanodaro.
Hurumende yeZanzibar yaida kuwedzera huwandu hwevashanyi kubva pamazana mashanu ezviuru akarekodhwa denda reCovid-500,000 risati rasvika kusvika pamiriyoni imwe chete gore rino, akadaro.
Hurumende yeZanzibar yakanga yarenda zvitsuwa zvidiki zvipfumbamwe kune vanodyara mari mukupera kwaZvita 2021 ndokuzowana madhora mazana maviri nemakumi matanhatu neshanu emamiriyoni kuburikidza nemitengo yekutora mari yekurenda.
Kuburikidza neZanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA), zvitsuwa izvi zvakakwereteswa kune vangangove maInvestors pasi pezvibvumirano zvenguva refu.
Executive Director veZIPA, VaShariff Ali Shariff vati zvitsuwa zvakawanda zvakavhurirwa kurojesa kana kurojesa kune vane mari dzepamusoro.
Zvitsuwa zvakakosheswa zvakaitirwa kuti zvikwidziridze ipapo kuvandudza mari muchitsuwa, kunyanya kuvakwa kwemahotera evashanyi nemapaki emakorari.
Zanzibar ine zvitsuwa zvidiki makumi mashanu nenhatu zvakatemerwa kusimudzira kushanya uye kumwe kudyara kwemugungwa.
Iri kutarisa kuve bhizimusi muIndian Ocean's Eastern Rim, Zanzibar yave kunanga kubata masevhisi indasitiri uye zviwanikwa zvemugungwa kuti iwane yainofungidzira yeBlue Economy.
Vaenderera mberi vachiti hurumende yakaisawo zvisungo kune vose vanoda kusima mari dzavo zvinosanganisira kupinza basa vagari vemunzvimbo iyi, kuchengetedzwa kwenharaunda, uye kutara nzvimbo dzakananga dzekuti vagari vemuno vaenderere mberi nemabasa avo ehupfumi.
Zanzibar ndiyo yakanakisa nzvimbo yekukwira zvikepe, snorkeling, kushambira nema dolphin, kutasva bhiza, paddling board pakunyura kwezuva, kushanyira sango remangrove, kayaking, kuredza kwakadzika-gungwa, kutenga, pakati pemamwe mabasa ekuzorora.
Beach upfumi inivhesitimendi ushanyi Zanzibar
Mufambiro Wemufambi Wenhandare Yendege yeFrankfurt Unobva Wadzoka Zvinooneka Muhafu Yekupedzisira Yegore
Iyo Inoshamisa Texas Synagogue Attack: Mafungiro Ese ndeangu Pachake
Kuongororwa Ropa Nyowani Inogona Kufanotaura Kungangove Kufambira mberi ku...
Mabhodhi evashanyi anotarisa kune yavo chikafu chenyika kuti vawane...
Mushonga Mutsva Wekuongorora weAcute Myeloid Leukemia...
Yekutanga-ye-yayo-Rudzi-yakavakirwa Pan Cancer Kare ...
Pakati peKugamuchira Vaenzi uye Kuvengana: Kuteerera ku...
Motokari dzeMagetsi dzepamusoro dzakatorwa necars.com
New Fast Food Joint Kuwedzera nehunyanzvi mu...
Princess Cruises inounza hutsva hunobatanidza zvese zvinopihwa
Mirai kuUkraine Artists, Runyararo, Rusununguko rwe...
Multi Award Winner Pop Artist Lewis Capaldi Akagadzirira...
Skal International Inopemberera Zuva rePasi
Fabric Care Market 2022 Key Players, SWOT Ongororo...
Gamba Idzva Rekushanya, uye Kushamisika kweKuberekwa kwe80
Sustainability themed Turkish Airlines ndege inotora...
Malta Tourism Inozivisa Inonakidza International...
IATA: Kukura kwekutakura kwemhepo kunononoka, asi kunoenderera
International art exhibition inotora...
Neurological Disorders Kusunda Kusimudzira Brain Yakadzama...
Kuti urege kunetseka nezvedutu kana uchifamba
Kubhururuka Mumatenga eHawaii Kwangove Kwakachengeteka
CDC: COVID-19 kufa 'kwakawedzera' ne24%
World Tourism Network Inoombera UNWTO Kudana Runyararo...
Kufamba nendege kwakatumira kudzoreredzwa kwakasimba muna Kukadzi 2022
Poland yakavhurika uye yakachengeteka kune kushanya izvozvi
Belgian Pride inodzokera kuBrussels gore rino
Vegan Protein Musika Kuongorora Saizi Nekutarisisa Pa...
Surface Disinfectant Chemicals Market inotarisirwa ...
Kushanya & tourism sector inobata zviitiko pasi ne2% ...
Kushanyira Venice: Nenguva isipi Kuchengetedzwa uye Kubhadhara kunodiwa
Sandals Foundation Inopa Digital Mahwendefa e...
Latest Breaking News Shows
Iyo inofara kwazvo SKAL International Club muNyika iHelsinki, Finland
Breaking News Show 22/23 Chivabvu 2022: Muchirongwa chenhau chiri kubuda sangana nemutungamiri weSKAL International Helsinki Karl Halonen achitsanangura zvakawanda nezve tourism Destination yeFinland. Iyi nhaurirano inouya panguva iyo Finland yaida kujoina NATO panguva yehondo yeRussia-Ukraine. Izvi zvinoreva shanduko huru kune indasitiri yekufambisa uye yekushanya muFinland. […]
Varume veGreen kubva kuUniverse, Tourism, uye Tipping
Mune yanhasi Breaking News Show Dr. Peter Tarlow naJuergen Steinmetz vanokurukura The Green Men kubva kuUniverse, kunze kweSpace Tourism, chengetedzo, uye chengetedzo. Zvakare pane ajenda iri kupenengura mukushanya uye chii chisina kunaka nehurongwa. World Tourism Network yakagadzirira kupindira. Breaking News Show 18 Chivabvu 2022 Iyo post […]
Breaking News Show 13 Chivabvu 2022
Juergen Steinmetz naDr. Peter Tarlow vanokurukura mamiriro ezvinhu epanguva ino mukufamba kwenyika uye kushanya. Kubva pakuvhara kweRepublic yeKiribati, nyaya dzeCOVID muNorth Korea, hondo yeRussia-Ukrainian, inflation, uye maonero ekufamba uye kushanya kwemwaka unouya wezhizha. Iyo post Breaking News Show 13 Chivabvu 2022 yakatanga kutanga pa […]
Space Tourism Security
Mune yanhasi Breaking News Show muna Chivabvu 8, 2022 Dr Peter Tarlow naJuergen Steinmetz vakakurukura kukosha kwekuchengetedza nzvimbo yekushanya kugadzirira zvizvarwa zvinotevera. Zvinokurukurwawo matambudziko aripo uye mamiriro azvino mukufamba kwepasirese nekushanya. Iyo post Space Tourism Security yakatanga kutanga paBreak News Show.
SKAL International Jakarta: Nyaya yerudo nemutungamiri Alistair Speirs
Sangana naAlistair Speirs, mutungamiri weSKAL International Jakarta. Alistair aigara muIndonesia kwemakore anopfuura makumi mana uye haadi Jakarta, Bali neLombok chete, asi Indonesia yese. Anogara uye anofema kufamba uye kushanya. Yake SKAL Club muJakarta ine ajenda: Kuita bhizinesi neshamwari, nharaunda, kusimba, uye vatauri vemhando. Iyo post […]
Jamaica inotora Nyaya yayo Yekushanya kuUnited Nations mushure mechibvumirano neHumambo hweSaudi Arabia
Kusaina kwakaitika kuPermanent Mission yeHumambo hweSaudi Arabia kuUN, pachiitiko cheUN High-Level Thematic Debate on Tourism. Jamaica neKSA dzakasaina chibvumirano cheMOU pamusoro peKushanyirwa pamwe nekuvandudzwa kweSustainability uye kusimba pasi rose!
SKAL Paris ichave makumi mapfumbamwe muna Chikunguru - uye iwe wakakokwa kuPati muParis
Nhengo dzeSkål International dzakakokwa kuti dziuye kumhemberero yekusvitsa makore makumi mapfumbamwe kweSkål International Paris kirabhu nhamba yekutanga! Maka pasi Chikunguru 90-1, 1 Iyo kirabhu bhodhi iri kushanda kukukurudzira iwe chiitiko chinoshamisa uye chisingakanganwike! Tinotenda Mutungamiriri wedu weNyika Burcin Turkkan naMichael, muzukuru wa'Baba veSkål International', Florimond Volckaert, vane […]
Yakasimba Yepasi Vechidiki Summit paClimate Hushamwari Kufamba
Nhasi iyo Breaking News Show muKubatana neWorld Tourism Network ine yechipiri Strong Earth Youth Summit kubva kuSUN X Malta. Musangano uyu wakanangana ne Tourism Climate Resilience uye Emission Reduction. Yakarongwa neakareba WTN mutsigiri Muzvinafundo Geoffrey Lipman uye akazvipira gore rega rega kuMemory yaMaurice Strong, uyo […]
Kofi muManila, SKAL muPanama neCanada - zvese zviri muBreaking News Show yanhasi
Honolulu, 30 Kubvumbi 2022: Sharlene Batin naVerna Covar- Buensuceso vanobva kuPhilippine Tourism Board vari kutiendesa kuManila Coffee Festival Kuvhurwa nhasi. Sanganawo naDenis Smith, Mutungamiriri Mukuru, SKAL Canada muWinnipeg, uye Roberto Emilio Baca Plazolo, mutungamiri weSKAL Panama. Dzidza kuti SKAL ndeyei, uye dzidza maonero neSKAL […]
Sevhisi neSmile: Breaking News Show 26 Kubvumbi 2022
Juergen Steinmetz ari kuManila, uye Dr. Peter Tarlow ari kuTexas kukurukura izvo zvinogadzira misoro nhasi mukufamba kwenyika nekushanya. Juergen Steinmetz ari kuManila mushure memusangano weWTTC uye nhaurirano yanhasi ndeye kukosha kwekunyemwerera mubhizinesi rebasa rekushanya. Philippines inotumira kunze simba guru revanamukoti uye kugamuchira vaeni […]
Dzvanya kuti uwane Nhau nezveDunhu
Yepakati Ripabhuriki Afrika
Papa Nyu Gini
Sendi Kitsi ne Nevhisi
Sendi Vincent neGirenadhini
Sayo Tomu nePurinzipu
Turks uye Caicos